6 Thrifty Atụmatụ Mgbe Train ejegharị Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 6 Thrifty Atụmatụ Mgbe Train ejegharị Na Europe
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/01/2020)
O ruru otu mgbe, mgbe na mmefu ego na-ekere òkè ị na-ahọrọ ebe (ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụghị dị ka nnukwu nke a ọrụ!) ihe dị mfe; ụbọchị ndị a, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga, anyị ga-enwe smart na ụzọ anyị aka anyị mmefu ego. Ọ bụ ezie na ụgbọ okporo ígwè eme njem na Europe bụ ihe kasị mmefu ego-enyi na enyi nhọrọ maka onye ọ bụla na-achọ na-enweta ihe ndị kasị akpali akpali (na-atụrụ ndụ!) ụzọ njem, e nwere ike ka na-enwe obere akpa-mfịna ọnọdụ ị chọrọ iduzi doro anya nke.
Ya mere, enyere gị aka nweta ọtụtụ ihe nke gị njem, anyị na-etinye ọnụ a ndepụta nke ihe anyị na-eche ndị top ego na-azọpụta Atụmatụ maka ụgbọ okporo ígwè na-ejegharị ejegharị na Europe.
Ekwela Njem na elu Holiday Times
Ee, onye a ga-aga enweghị na-ekwu, ma na e nwere ihe ọ bụla nsogbu na-echetara gị nke ya otu ugboro ọzọ. Mgbe ọ na-abịa na-azụ-ejegharị ejegharị na Europe, ememe ị chọrọ iduzi doro anya nke bụ isi Christmas, Afọ ọhụrụ, na Ista nakwa dị ka ọnwa nke August. N'ihi na a kpatara, na ahịa rịa n'oge ndị a ọnwa, ka ... na-arụ ọrụ na gburugburu ha a obere bit.
Ọ bụ ezie na-enye ha ndụmọdụ ị bụghị inyocha akụkụ nke Europe na ị chọrọ ịhụ bụ ụdị mmegbu na anya-N'ubochi, anyị na-eme ya n'ihi na gị uru. Train-ejegharị ejegharị na Europe, ị ga-ahụ ihe niile na n'ebe ọdịda anyanwụ bụ ụzọ ọzọ dị oké ọnụ karịa n'ebe ọwụwa anyanwụ ngọngọ. Ya mere, ruo mgbe gị obere akpa na esi ike, gaba East na ịchọpụta beauties nke dị n'akụkụ nke a Europe!
IHE: Mgbe na Eastern Europe, na-eme ka n'aka na ị kwụsị Prague (Czech Republic), Budapest (Hungary), Belgrade (Serbia), Bucharest (Romania), Zagreb na Split (Croatia), Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) na Moscow (Russia).
Zere 1st Class Mgbe Train ejegharị na Europe
Ọfọn, O doro anya na! ka, atụla otu n'ime ndị njem bụ ndị "na mberede" nọdụ na 1st klas. Gịnị? N'ihi na ị ga-ejedebe na-akwụ ụgwọ a dị nnọọ oké ọnụ mma ma ọ bụrụ na ị na ina-ejide nke ga-eri gị karịrị 1st klas tiketi onwe ya!
Book mberede ụgbọ oloko ma ọ bụrụ na Train ejegharị na Europe n'etiti mba
n'otu ntabi anya ụgbọ oloko, aka n'abalị ụgbọ oloko ndị kasị na-eri-irè nhọrọ maka European njem. Ọ bụghị naanị na ị na ịzọpụta na price nke bed ma ị na-na-na-enweta Europe si a dum ọhụrụ n'ọnọdụ.
Mkpọ a Picnic
Ọfọn, bụghị n'ụzọ nkịtị a picnic ma a "stash" nri n'ụlọ, otú ị na-adịghị ịzụta ihe dị oké ọnụ nri na osisi. Ị ga-azọpụta a uba ma ọ bụrụ na ị na ngwaahịa elu na emeso na ụlọ ahịa!
Zere Ịzụchapụta Advanced Tickets on Shorter Journeys n'ime Chile Europe
Mgbe ụgbọ okporo ígwè eme njem na Europe, anya obere njem na-pricier karịa ogologo ndị; ka, e nwere uru nke enweghị ka akwụkwọ tupu nke na-gbakwunye na mgbanwe nke gị na njem na ichekwa ya. Mgbe ị na-ejegharị ejegharị na Chile Europe na ị pụrụ ịzụta a tiketi na ọdụ n'ihu-abanye ụgbọ okporo ígwè.
Zọpụta-A-Train bụ ụzọ kasị mma ka akwụkwọ mma ebe na ọnụ ala udu na-enwe gị ụgbọ okporo ígwè eme njem na Europe na a mpempe uche.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-train-traveling-europe%2F%0A - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
europeantravel europetravel Atụmatụ Train Travel traveltips